Soomaaliya oo ka qayb gashay bandhigga Todobaadka dhaqamada oo lagu qabtay Masar+Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home SAWIRO Soomaaliya oo ka qayb gashay bandhigga Todobaadka dhaqamada oo lagu qabtay Masar+Sawirro
Soomaaliya oo ka qayb gashay bandhigga Todobaadka dhaqamada oo lagu qabtay Masar+Sawirro
Waxaa Todobaadkan Magaalada Qaahira ee caasimadda Dalka Masar lagu soo gaba-gabeeyay bandhigga dhaqannada Aradyda wax ka barata Dalkaasi oo ay Soomaalidana qayb ka tahay.
Arday ka kala socota dhowr iyo Labaatan Dal oo bandhiggaasi ka qayb gashay ayaa waxaa si weyn ugu dhex muuqatay Ardayda Soomaaliyeed oo halkaasi kusoo bandhigay Ciyaaro Hiddo iyo dhaqan ah, Dhar, Cunto iyo Alaabada laga adeegsado Miyiga iyo Magaalooyinka Soomaaliyeed.
Dhallinyaro ku lebbisan isla markaan lulaya Calankeenna Soomaaliyeed ayaa goobta wacdaro ka muujiyay, iyadoo qiimeeyn la sameeyayna ay Soomaalidu ka gashay kaalimaha ugu horreeya bandhig dhaqameedka ka dhacay Qaahira.
Bandhiggan oo ka dhacay Jaamacadaha 6-da Oktoobar iyo Qaahira ayaa waxaa usoo daawasho tagay Kumanaan Dad ah oo isugu jira, Safiirro kala duwan iyo Arday , kuwaasoo aad ula dhacay bandhig dhaqameedka, gaar ahaan wacdaraha ay muujiyeen Ardayda Soomaaliyeed.
Qaar ka mid ah Ardayda Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta Qaranka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin wacdaraha ay goobta ka muujiyeen, iyagoo intaa raaciyay inay jeclaysteen dhaqanka Soomaalida Ardaydii kale ee bandhigga ka qayb gashay, isla markaana ay doonayaan inay bartaan.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Masar Amb; C/qani Maxamed Wacays iyo u qaybsanaha waxbarashada Maxamuud Gawgawle, oo munaasabaddaasi goob joog ka ahaan ayaa waxay bogaadiyeen kaalinta ay ka qaateen Bandhig dhaqameedka Ardayda Soomaaliyeed, waxanay kula dardaarmeen inay halkaasi kasii wadaan dedaalkooda.
Previous articleShirkii Madasha Wasiirada Arrimaha Gudaha, Dib-u-heshiisiinta iyo gobolka Benaadir oo la soo xiray “SAWIRRO”
Next articleWasiirka Caddaaladda oo furay shir ku saabsan Caddaaladda dalka ( Sawirro)